Zimbabwe in turmoil as it battles worst economic crisis in a decade – The Irish Times
Thu Oct 25 2018 - 01:00
The scenes of economic turmoil in Zimbabwe in recent weeks suggest that reviving the country's battered fortunes in the post-Mugabe era will be a mammoth task for new president Emmerson Mnangagwa.
Confirmed as Zimbabwe's new leader in August following a disputed July 30th presidential election, Mnangagwa promised a different approach to governance than the one employed by his predecessor, the dictator Robert Mugabe, who was ousted from power last year.
Further exacerbating the situation is the scarcity of the US dollar, which Zimbabwe adopted as its currency in 2009
"In households that do not have access to foreign currency the situation is dire," Ms Hlatywayo told The Irish Times, adding: "Last weekend a friend of mine suffering from cancer died because he could not get the drugs necessary to fight the disease."
Last week MDC Alliance president Nelson Chamisa – Mr Mnangagwa's main challenger in the July 30th presidential poll – called for a crisis meeting with his rival to try to bring the deteriorating economic and political situation under control.
Movement For Democratic ChangeEmmerson MnangagwaGladys HlatywayoNelson ChamisaRobert Mugabe